Baarlamaan | zmekk
Istuurtinge waa baarlamaanka Noorweey, ama golaha sharci dejinta, wuxuuna ku yaal Oslo. Sidaas darteed bay Oslo u tahay caasimadda Noorwey.
Halkan waxa ka shaqeeya 169 xubnood oo baarlamaanka ah oo dadweynuhu soo doorto afartii sannadoodba mar. Istuurtingaha ayaa ka mas’uul ah dejinta iyo beddelaada sharciyada Noorwey oo maamula dowladda Noorwey.
Xubnaha baarlamaanka ayaa go’aamiya sida lacagta Noorwey loo isticmaalayo. Waa lacagta Noorwey shaqaysatay, balse waxaa ku jira lacag dadweynuhu bixiyey sida cashuurta.
Noorwey waa bulsho-daryeel (velferdssamfunn). Tan waxay la macno tahay in dowladda Noorwey ay ilaaliso in qof kasta oo dalka deggan helo wuxuu u baahan yahay.
Dawladda lacagteeda waxa lagu bixiyaa dugsiyada iyo tageero caafimaad lacag la’aan u ah dadweynaha. Haddii qof shaqo haysan ama uu xanuunsan yahay wuxuu lacag ka helayaa dawladda si uu awood ugu helo cunto iyo meel uu ku noolaado. Lacagta dowladda waxa kale oo lagu bixiyaa daryaalka waayeelka, milateriga iyo dhismaha waddooyinka.
Soo bandhigidda sida lacagta loo isticmaalayo waxa la dhahaa miisaaniyadda dowladda.
Xukuumadda ayaa soo bandhigaysa miisaaniyadda dowladda sannad kasta, markaas ayaa xubnaha baarlamaanku ka doodayaan oo wax ka dhimayaan ama ku kordhinayaan
Waxaa jira doorasho baarlamaan afartii sanaba mar. Markaa dadka norwwey waxay doortaan dadka fariisan doona baarlamaanka. Muwaadiniinta norweey waxay leeyihiin xuquuqda codaynta marka doorosha Baarlamaan jirto laga bilaabo markay 18 sano jirsadaan.
Marka doorasho jirto qof looma codeeyo ee waxaa loo codeeyaa xisbi
Xisbiyadu dadweynaha waxay u ballan qaadaan inay fulinayaan barnaamijka xisbiga oo ay u soo bandhigaan dadweynaha doorashada ka hor.
Xisbiyada hela codad badan ayaa ku guulaysta xubno baarlamaan oo badan. Xubnaha baarlamaanka waxay ka kala yimaadaan xisbiyo kala duwan oo badanka waxyaalo badan bay isku khilaafaan.
Intaanay gaarin go’ aan way doodaan, si qof kasta loo maqlo aragtidiisa. Ka dib waa codeeyaan, go’aanka loo batona waa la raacaa.
Doodadaha siyaasadeed waa u furan yihiin dadweynaha, oo qofkii rabaa wuu iman karaa oo dhegaysan karaa waxay siyaasiyiintu ka doodayaan.
Doodaha Istuurtinguhu waa u furan yihiin dadku inay dhegaystaan. Maxaad u malayn in sababtu tahay?
Noorwey waa bulsho daryeel leh. Tan macnaheedu waa in dowladdu dadka ilaaliso oo ay lacagta isbitaalada iyo iskuulada dhiibto. Ma oran kartaa waddankaad u dhalatay waa bulsho daryeel leh?
Istuurtinge – barlamaanka Noorwey ee sharciyada u sameeya
Bulsho-daryeel leh – marka dawladdu qaado masuuliyadda dadka waddanka deggan inay noloshoodu fiican tahay
Miisaaniyadda dowladda – qorshaha aydowladdu u isticmaalayso lacagta sanadka soo socda